Qaab gaar ahTubada musqusha ee dhexda leh ee kelida ah ee gacanta lagu qabto ayaa bixisa muuqaal qurux badan - oo leh maroojin! Naqshadaynta maroojiska saddex-geesoodka ah ee gaarka ah iyo dhammaystirka nikkel-cadaashka caadiga ah ee qasabadda musqusha ganacsiga ayaa hubaal ah inay noqon doonto waxyaabaha ugu muhiimsan ee qurxin kasta oo musqusha ah.
Farshaxan tayo lehTubada faaruqa musqusha ee hal daloolka ah ayaa leh xidhidhiyeyaal naxaas ah oo adkaysi u leh daxalka iyo miridhku. Kartuushka dhoobada ah ee aan dhibicda lahayn ayaa lagu dhex dhisay tuubada, si uu si habsami leh ugu wareego oo uu si adag u xidho si loo hubiyo isticmaalka muddada-dheer iyada oo aan diiqaynin ama diirin.
Fudud in la rakibo laguna shaqeeyo: Waxaanu ku siinaynaa qalab dhamaystiran iyo qalab rakibo, oo ay ku jiraan biyo-baxa pop-up, saxan sagxad ah, 0.5m tuubada tucai ee dammaanadda tayada leh, galoofyada iyo wixii la mid ah. socodka biyaha, ka dibna hore u wareeji gacanta si aad u kordhiso heerkulka biyaha
Hawo-qaade biyo badbaadiya oo waara: Waxqabadka sare ee Neoperl Aerator ee tuubada saxanka musqusha waxa ay bixisa socodka biyaha fudud oo siman waxa ayna badbaadisaa in ka badan 50% isticmaalka biyaha. Si fudud ayaa looga saaray aaladda hawo-mareenka ee lagu nadiifiyo si ay kuu siiso waayo-aragnimada ugu fiican muddo sanado ah.
damaanad: Iibkaagu wuxuu daboolayaa 5 sano oo dammaanad xaddidan ah iyo siyaasad soo celin 90 maalmood ah, markaa haddii aadan ku qanacsanayn sabab kasta, fadlan nagala soo xiriir email ahaan waxaanan si farxad leh ku daryeeli doonnaa!
Wuxuu siiyaa wow-factor musqul kasta
Naqshadaynta saddex geesoodka ah ee patented ee Maraykanka
Nikkel si xarrago leh loo caday
Ka samaysan qalab tayo sare leh
kabaal-hal-gacan oo raaxo leh
Ku badbaadiya ilaa 50% biyaha hawo-qaadayaasha hal-abuurka leh
3-sano oo damaanad qaad ah